« Raharaha Anjozorobe » – Fitakian’ny Antandroy: “Aiza ny nandevenana ny zanakay… ? ” | NewsMada
« Raharaha Anjozorobe » – Fitakian’ny Antandroy: “Aiza ny nandevenana ny zanakay… ? ”
Tsy mbola mifarana eo. Namory mpanao gazety tetsy 67 ha ny zanak’Androy, omaly nampahatsiahy indray ny “Raharaha karieran’Anjorobe” niteraka fahafatesan’ny zanak’izy ireo. Nitondra porofo amin’ny tsy maha afa-bela ny zanaky ny filoha teo aloha, Rajaonarimampianina izy ireo.
Takin’ny zanak’Antandroy ny hanoroan’ireo nahavanon-doza ny toerana nandevenana an’i Mandinisoa ao Anjozorobe, tamin’ireny raharaha momba ny kariera any an-toerana ireny. “ Aiza ny nandevenana ny zanakay ? Takinay ihany koa ny hampiharana ny lalàna araka ny tokony ho izy ary tsy hanavahana na iza na iza izany”, hoy ihany izy ireo.
Ankoatra izany, naseho ampahibemaso teo anatrehan’ny zanak’Androy ny sary sy ny horonantsary manaporofo ny nandraisan’ny zanaky ny filoha teo aloha, Rajaonarimampianina anjara tamin’ny raharaha nahafaty an’i Mandinisoa. Nohitsin’izy ireo fa tsy hipetra-potsiny intsony ireto Raiamandreny ireto, manomboka izao. “Hisy ny fitetezam-paritra hatao manerana ny Nosy hanehoana amin’ny zanaka Antandroy sy ny Malagasy izany, hanaporofo ny maha meloka ny zanaky ny filoha teo aloha”, hoy ihany izy ireo.
Hanohana ny kandidà laharana faha-13 amin’ny fifidianana
Tsiahivina fa anisan’ny fanambarana nataon’izy ireo, omaly ny fanohanany tsy misy fepetra ny kandidà Rajoelina noho ny ezaka vitany. “Hany mpitantana tonga voalohany nitondra fanampiana tany Androy nandritra ny kere nanjo ireo mponina tany. Hanao ny herinay rehetra izahay hanohanana azy ka miantso ny zanaka Antandroy rehetra hanohana azy”, hoy ihany izy ireo.